ရန်ကုန်စံတော်ချိန်အသုံးပြုနိုင်ပြီ — MYSTERY ZILLION
May 2007 edited February 2010 in MZ News
User CP -> Edit Option -> Time Zone -> GMT +6:30 Yangon
How can i study this web-side.
ကျွန်တော်လည်း အဲဒီအကြောင်းကို သိပ်မသိပါ။
အမ်.... ဘာလို့ ဒီကို တန်းရောက်သွားတာလဲ...
ကိုစေတန် ပြောတာကိုတော့ နားလည်ပါတယ်...
ကျန်တဲ့ သူတွေက ဘာတွေလာပြောနေမှန်း မသိဘူး...
စိတ်တော့ မရှိပါနဲ့နော်... တကယ်မသိလို့မေးတာပါ.....
လော့အင်ဝင်ရင် ဒီကိုတန်းရောက်တာလား..... လုပ်ကြဦးနော်....
ကျွန်တော့ စိတ်ထင် ဖိုရမ်အသုံးပြုနည်း ( ဥပမာ.. post တင်နည်း၊ အဟောင်းတွေကို လိုက်ဖတ်နည်း) တွေကို သိချင်လို့ မေးတာနေမှာပါ။ စမ်းရေးကြည့်တာ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ အခုတလော MZ ကနာမည်ထွက်လာတော့ လာလည်တဲ့လူတွေများပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက သာမန်လူတွေက ကွန်ပျူတာနဲ့ အထိအတွေနည်းတော့ ဘယ်လို သုံးရမလဲ မသိလို့ မေးကြတာ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ အဆင်ပြေရင် ကိုကြီး googooster က ဖိုရမ်မှာ ဘယ်လို ဆွေးနွေး လေ့လာရတယ်ဆိုတာကို ပိုစ်တင်ပေးလိုက်ပါလား။ ဟီး (အချွန်နဲ့ မလိုက်ပြီ) :P
စေတန်က ရန်ကုန်အချိန် သုံးလို့ရကြောင်း သိစေချင်လို့ Login ၀င်ပြီးတာနဲ့ သူပေးချင်တဲ့ သတင်းကို သိအောင် ဒီနေရာကို Redirect လုပ်ထားတာ ဖြစ်မယ်ဗျ။
ကျန်တဲ့ လူတွေကတော့ ရောက်ရာနေရာမှာ တန်းမေးလိုက်တာ ဖြစ်မယ်။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
ရေးတော့ ရေးချင်တယ်ဗျ.... ဒါပေမယ့် Template ပြောင်းသွားရင် တစ်မျိုးဖြစ်သွားဦးမယ်... လောလောဆယ် အပေါ်က Menu တွေက Link တွေဆို.. အလုပ်မလုပ်တာကများနေတယ်... လုပ်ပါဦး စိုင်းစိုင်းရယ်.... Mark Forums Read လုပ်မရတာ တော်တော် ဒုက္ခရောက်လို့ပါဗျာ... :P
I'd like to know java learning in this web site . Please send me an email . please help me.
ကျွန်တော့်ကို ဘယ်ကိုခေါ်လာတာလဲဟင်။ မျက်စိလယ်နေပြီ။ အိမ်ကိုဘယ်လိုပြန်ရမလဲ မသိတော့ဘူး။ (
ဘယ်လိုမျက်စေ့လည် နေတာလဲ....အိမ်ကို လိုင်းကားစီပြီးပြန်လိုက်ပါကွယ် :d:d
အစ်ကိုကြီးပဲ အားလုံးကို ဦးဆောင်ပြီး ဖြေပေးပါဦး:77:
အစ်ကို့ကို ကြည့်ရတာ experience တော်တော်ရှိပုံရတယ်:5:
ညီလေးတို့ လိုအပ်တာလေးတွေကို ဖြည့်စွက်ပေးပါအုံး:D
:39: မြန်မာနိုင်ငံ IT လောကရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်:67:
:6:ကျွန်တော်ပြောတာတွေက အစ်ကို googooster အတွက် ပြဿနာမရှိလောက်ပါဘူး:65:
Tun Tun Naing wrote: »
မော်မော်တို့ ရေ..... ဒီ တစ်ယောက်ကို နေရာပြပေးလိုက်ပါအုံးနော်...........